Ngwakọta Amazon - na-ebupụ E-ebupụ na Amazon, Ebay, Allegro na Etsy
Ọ dị mfe iji Propars jikwaa ụlọ ahịa Amazon.com gị!
Bulite ngwaahịa gị na ndị na-ere ahịa wee ree ha na Amazon, ikpo okwu e-commerce kasịnụ n'ụwa!
Propars Amazon bụ onye na-eweta ọrụ gọọmentị.
Site na ndị na -akwado, njikọta Amazon, bido ree mba niile ebe Amazon na -arụ ọrụ, ọkachasị na America, Europe na Peninsula Arab!
A na -anakọta iwu gị sitere na Amazon n'otu ihuenyo yana iwu gị ndị ọzọ niile.
Ị nwere ike ree ngwaahịa ị gbakwunye na Propars na Amazon site na ịpị otu ọpịpị.
Kedu ihe kpatara ndị mmadụ ji azụta m ka ha mepechara ụlọ ahịa na Amazon?
Ọ bụ ntụkwasị obi ika Amazon, ọ bụghị ụlọ ahịa gị."
ọnụ ọgụgụ nke ndị na -ere ahịa 651.000. Taa kwa 3.145, kwa elekere 131, 2 ndị na-ere ahịa kwa nkeji
pụtara. Amazon na nkezi ọnụego ugbu a
Njikọ nke Amazon
Ịre na Amazon.com dị ka nrọ na-emezu maka ọtụtụ azụmahịa. Otú ọ dị, imepe ụlọ ahịa na ire ere na nnukwu ahịa a dị mfe karịa ka ị chere. Iji nwee ike ịre na Amazon na ntinye Propars-Amazon, ọ zuru ezu ịnweta ndebanye aha ụtụ isi na Turkey. Ọ bụrụ na ị nwere ndekọ ụtụ isi, naanị ihe ịchọrọ bụ Propars ka ị bụrụ onye na-ere ahịa n'ahịa kacha ukwuu n'ụwa!
N'ịbụ onye mbụ na naanị ụlọ ọrụ na Turkey ijikọ na Amazon.com, Propars dịkwa na Amazon SPN ndepụta na ọ bụ Amazon ngwọta onye mmekọ na Turkey.
Ị nwere ike ijikwa ụlọ ahịa gị niile site n'otu ebe site na ijikọta ụlọ ahịa ndị ọzọ mebere gị na panel Propars, ebe ị ga-ere na Amazon.com.
Amazon.com Ebe Ahịa Kachasịnụ n'ụwa
Amazon bụ saịtị e-azụmahịa kachasị n'ụwa nwere ihe karịrị nde 300 ndị ọrụ na-arụsi ọrụ ike yana mgbanwe karịrị otu ijeri dollar kwa ụbọchị. Ịbụ onye na-ere ihe na gburugburu ebe obibi a pụtara ibuga ngwaahịa gị n'ụwa niile. Ọdụ ụgbọ mmiri dị mfe ma dị nchebe maka azụmahịa nke chọrọ ime e-Export.
Na mgbakwunye, mmata akara Amazon na ntụkwasị obi na-echebe gị pụọ na mmefu dị ukwuu nke nwere njedebe na-ejighị n'aka.
Ngwaahịa gị, nke a ga-erere na USD na Amazon.com, ga-enweta uru na TL wee bawanye uru gị. E-Export na-enye gị ọtụtụ nde ndị ahịa na-enweta ego karịa ọnụego mgbanwe mba ofesi.
Ntọala Ụlọ Ahịa Amazon Integration
Ịmepụta ụlọ ahịa na Amazon.com bụ usoro siri ike ma dị egwu. N'ihi nke a, jide n'aka na ị kwadoro akwụkwọ gị nke ọma na kpamkpam. Akwụkwọ nke azụmahịa gị na Turkey dị na Amazon.
Echefula na ị nwere ike nweta nkwado ọkachamara metụtara usoro a site na ndị otu Propars. Mgbe e mere usoro ziri ezi, usoro nhazi ụlọ ahịa bụ ọkwa nke nwere ike ịgafe ngwa ngwa na ngwa ngwa. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị nwere ụlọ ahịa Amazon, ọ na-ewe naanị sekọnd ole na ole iji tinye ya na panel Propars gị.
Ị nwere ike iru ọkachamara Propars ugbu a iji nweta ozi zuru ezu gbasara nhazi ụlọ ahịa na ntinye.
Site na Propars, onye mmekọ azụmahịa Amazon na Turkey, ọ ga-ekwe omume maka azụmaahịa ọ bụla ire na Amazon. Ụfọdụ n'ime atụmatụ ị nwere ike irite uru na ntinye Propars-Amazon bụ ndị a;
- Ndepụta ngwaahịa na Amazon.com,
- njikwa ịtụ ahịa na akwụkwọ ọnụahịa e-efu efu,
- Ndepụta ngwaahịa akpaaka,
- ohere njikwa Turkish,
- Asụsụ akpaaka wee tụọ ntụgharị asụsụ,
- Nkwado ntọala ụlọ ahịa,